Nezvedu - Huizhou Aimsea Newway Technology Co., Ltd.
Iyo kambani yakanyatsoburitsa otomatiki yekugadzira tambo uye ERP manejimendi sisitimu, ISO9001-2015 mhando manejimendi sisitimu, uye ine anopfuura makumi mashanu ehurumende-e-iyo-ye-hunyanzvi ekuvandudza marabhoritari uye nzvimbo dzekuyedza dzezviratidziro, rheometers, QUV ultraviolet kuchembera zviridzwa, nezvimwe, "AIMSEA 志 海" chiratidzo chakapihwa chiratidzo chakakurumbira chePurovhinzi yeGuangdong. Izvo zvigadzirwa zvekambani zvakahwina iyo "2009 Guangdong Province Kiyi Nyowani Zvigadzirwa" uye "2010 Guangdong Dunhu Yakazvimirira Yekutsvagisa nekusimudzira Nyowani Chigadzirwa Mipiro" Kubva 2011, kambani yakapihwa iyo yepamusorosoro bhizinesi bhizinesi chinodzidziswa kwemakore matatu akateedzana uye yakapihwa zita re "Enterprise Chikwereti Kuongorora AAA Enterprise" uye "2014 Guangdong Yakanaka Chikwereti Bhizinesi". Iyo kambani yakaita shanduko yemugove mu2015 uye yakabudirira kunyorwa mu "National SME Equity Trading Center" munaKurume 2017, stock kodhi 870684.
Mushure memakore akati wandei ekushanda nesimba, iyo "AIMSEA" mhando yakazivikanwa zvikuru nemisika yekunze neyekunze nemaindasitiri. Zvigadzirwa zveAIMSEA zvakapfuura iyo EU ROHS, REACH chitupa uye inopa MSDS kuchengetedzeka mishumo. Iwo makasitoma makuru akaiswa mukati mepasirese akanyorwa akanakisa PVC vagadziri. Iwo akakwana ekutengesa zvitoro anofukidza anopfuura makumi maviri ematunhu muChina, uye aivigirwa kune dzinosvika makumi maviri nyika nenzvimbo dzakaita seEurope, South America, Middle East, Japan, Southeast Asia, nezvimwewo Iyo inove pakati pezvakanakisa mune imwechete indasitiri munyika uye rave rinotungamira chiratidzo muindastiri uye mutungamiri mune isiri-chepfu uye inodzivirira nharaunda PVC inodzikamisa.
Muzvinafundo wedu. Yifeng Andrew Yan, Seinor PVC Injiniya weanopfuura makore makumi matatu nemashanu, akadzidziswa kemesitiri uye zvigadzirwa kubvira 1982;
Tarisa munzvimbo dzePVB zvakatenderedza stabilizer uye PVC yakagadziridzwa zvinhu.
Vakagadzira vanopfuura makumi matatu patent, 13 patents akanyoreswa zvinobudirira muChina.
Wakunda NO 1. Hunan Provincial Technology Prize muna 1989 "PVC / ABS Plastic Modified Project", muna 1991 "High Lubricant yePolyformalehyde Material".
Munyori we 《Plastic Stabilizers Technology uye Applications》 bhuku.
Abatsira pamusoro pemapurojekiti evatengi mazana mashanu, achikumikidza basa rake muEngency Additives pamusoro Penyika.
Redu & D department, ine 25 profecssional mainjiniya uye hunyanzvi nyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana. Makore makumi maviri nemaviri eruzivo rwekutsvagisa uye ehunyanzvi masevhisi ePVC ekuwedzera .Dhipatimendi redu rekushambadzira, rine makore mazhinji eanoshanda ruzivo, akabudirira mushandira pamwe pamwe nevekunze uye vekunze bhizinesi, Aimsea timu yakamira mukutenga kwevatengi, tanga kubva pamoyo pedu, mhinduro dzakagadziriswa, optimized fomula, yakagadzikana mhando uye inoenderera yehunyanzvi sevhisi yevatengi inogadzira yakawanda kukosha, wozogadza kuhwina-kuhwina kwenguva yakareba mamiriro, nekuti isu tiri PVC mhinduro mupi.
PVC Isina-Inotyisa Stabilizer, PVC yokuvirisa, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC Stabilizer, Pvc Imwe Pack Inodzikamisa,